ईमेल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन | Martech Zone
ईमेल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन
हिजो म क्र्यास भयो। मलाई थाहा छ मेरो काम गर्ने आदतहरू कत्तिको स्वस्थ छन्, तर मँ कामको वेगमा काम गर्ने झुकाव राख्छु। मैले मेरा पाठकहरूको साथ यस तरीकाले काम गरें, पनि ... केहि रातहरू निद्रा नलगाई परियोजना पूरा गर्नका लागि। काममा, हामी धेरै पहलहरूमा र्‍याम्प गर्दैछौं। मैले पहिले नै भरिएको तालिकाको साथ धेरै काम गरिरहेको छु जस्तो देखिन्छ। जब शनिबार आइपुग्यो, मैले केहि ईमेलहरू खोजें र बाँकी दिन (र अन्तिम रात) स्नुजिंग वा टेलिभिजनको अगाडि वनस्पति अवस्थामा बिताएँ। के यो तपाईको मान्छेले आफूलाई बढी भन्दा बढी काम गरिरहेको भेट्टाउछ?
एक सप्ताहन्त चेकलिस्ट वस्तुहरू चेक आउट गर्नु थियो ईमेल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन उद्योग। केहि पृष्ठभूमि: ईमेल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन सर्वर-साइड टेक्नोलोजी हो जसले कम्पनिहरूलाई फिल्टर, व्यवस्थित, र जेनेरिक ईमेल ठेगानाहरूमा आगमन ईमेलहरूको जवाफ दिन प्रयास गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण बिक्री @ वा समर्थन @ तपाईंको कम्पनी हुन सक्छ।
बाहिर अनुप्रयोगहरूको संख्या धेरै प्रभावशाली छ! म अन्य अनलाइन विक्रेताहरू के गर्दै छन् भनेर हेर्न खोज्दै छु। इ-मेल सेवा प्रदायक उद्योगमा, ईमेल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन एक दोस्रो कार्य हो कि हामी वास्तवमै यी मानिसहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनौं न त हामीसँग ती प्रणालीहरूको जटिलता छ जुन तिनीहरू गर्छन्।
ईमेल प्रतिक्रिया व्यवस्थापन प्रणालीको साथ, म विषय र शरीरमा खोजशब्द खोजीहरू लागू गर्न सक्दछ उपयुक्त व्यक्तिको लागि मेरो ईमेल मार्गमा। म अनुकूलित सन्देशको साथ तुरून्त ईमेललाई पनि जवाफ दिन सक्दछु। एउटा उदाहरण: म एउटा कम्पनीलाई ईमेल गर्न सक्छु र सोध्छु यदि तिनीहरूसँग छ भने एपीआई र समर्थन उद्यम ग्राहकहरु। मेरो ईमेल प्रतिक्रिया प्रबन्धन प्रणाली स्वचालित रूपमा बिक्री मान्छेलाई ईमेलमा पठाउँदछ जुन उद्यमी सम्भावनाहरूसँग डील गर्दछ एपीआई समर्थन।
साथै, म एक राम्रो उत्तर ईमेल प्राप्त गर्नेछु कि मलाई उनीहरूले मेरो ईमेल प्राप्त गर्यो र कोही छिटो सम्पर्कमा आउनेछन् ... यस बीचमा, कृपया यी लेखहरू र प्रस्तावहरू अनलाइन जाँच गर्नुहोस्। लि Within्क भित्र ईन्टरप्राइज र सामग्री लिंक हुन् एपीआई वेबसाइटमा लेख र प्रस्तावहरू जसले ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्दछ। समर्थन समूहहरूको लागि, यी प्रतिक्रिया ईमेलहरूमा ज्ञान-बेस लेखहरू हुन सक्छन् जुन ईमेलमा रिपोर्ट गरिएका विशिष्ट त्रुटि सन्देशहरू, इत्यादिका लागि लेखिएको हो।
यो थाहा बिना नै, हामी सबै यी प्रणालीहरूबाट ईमेलहरू प्राप्त गरेका छौं। यदि तपाईंसँग यी विक्रेताहरू वा अनुप्रयोगहरूको केही सीधा अनुभव भएको छ भने, मलाई एक लाइन ड्रप। म विशेष गरी रुचि छु यदि यो एक हो SaaS समाधान बरु हामी आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न खोज्दा हामी पा rein्गेलाई पुन: परिवर्तन गर्नुहुन्न।
मार्स 25, 2007 मा 11: 08 एएम
म आफैंलाई डग भेट्टाउँछु कि म अन्त्यमा हप्ताहरूसम्म आगोमा थाम्न सक्छु तर त्यसपछि एक दिन आउनेछ र म सादा थाकेको छु .. हड्डी थकित छु .. र जब यो हुन्छ म आफैं सुतिरहेको पाउँदिन वा दुई
एक पटक मैले त्यसो गरिसकेपछि म फेरि "सामान्य" तालिकामा जान सक्दछु 🙂
मार्स 25, 2007 मा 11: 18 एएम
खुशी छु म एक मात्र होइन, स्टीव!
मार्क्स 25, 2007 मा 1: 06 PM
मैले त्यो अनुभव गर्न पनि सुरू गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ म धेरै कुरा गर्दै छु। मलाई लाग्छ हामी सबैलाई ढिला गर्नुपर्दछ 🙂
मई 11, 2011 मा 7: 07 एएम
ईमेल निजी हो। बिग वा सानो व्यवसायले ईमेल प्रयोग गर्दछ। एक उपकरण जुन सजिलो र सस्तो छ। प्रभावी मेल प्रबन्धन सेवा तपाईंको ग्राहकहरूको साथ तपाईंको व्यवसाय सम्भावनामा पुग्न परिणाम दिनेछ।